August 2018 - Ceelhuur Online
August 31, 2018 August 31, 2018 admin449
Wareegto kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa lagu mamnuucay xaalufinta dhirta iyo ka ganacsiga dhuxusha deegaanada Galmudug. Wareegtada ayaa lagu sheegay in Galmudug danbi u aqoonsanayso jarista dhirta, iyadoo la faray ha’ayadaha amniga in ay ka hortagaan xaaluf deegaanka.
August 31, 2018 admin247
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wadahadallo la yeeshay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha Mudane Xi Jinping. Wadahadallani waxa ay hordhac u yihiin Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika. Madaxweyne Farmaajo waxa uu Madaxweyne Xi Jinping ku bogaadiyey dib u habaynta uu ku sameeyey siyaasadaha dalkiisa si waddanka Shiinaha loo gaarsiiyo horumar ballaaran. Dhankiisa, Madaxweyne […]
August 30, 2018 August 30, 2018 admin531
August 30, 2018 admin266
Madaxweynihii hore Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo 18 bilood ah dalka ka maqnaa ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho Caasimadda Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo dhoweynta Madaxweyne Xasan Sheekh u saartay wafdi wasiiro ah oo uu hoggaaminayay Wasiirka Amniga, kuwaasoo garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay. Xildhibaano ka tirsan labada Gole iyo xubno horay xilal […]
August 29, 2018 admin259
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u amba-baxay dalka Shiinaha oo ay kaga qayb galayaan Shirka Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee (FOCAC). Madaxweyne Farmaajo ayaa furitaanka Madasha ka hor waxa uu kulan gaar ah la yeelan doonaa dhiggiisa dalka Shiinaha Mudane Xi Jinping. Labada Madaxweyne ayaa ka […]
August 29, 2018 admin269
Taliska Ciidanka Mareykanka Africa ee AFRICOM ayaa wuxuu sheegay Duqeyn dhacday 27 August 2018 inuu ku beegsaday xubno ka tirsanaa Al Shabaab, kuwaasi oo ku sugnaa meel 40-KM Koonfur Galbeed ka xigta Magaalada Muqdisho. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay weerarkaan uu ku dilay 3 nin oo ka tirsanaa Al Shabaab, islamarkaana aanay jirin khasaare dadka […]
August 29, 2018 admin249
Madaxweyne ku xigeenka Dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo wafdi la socday ayaa maanta gaaray Magaalada Cabudwaaq gobolka Galgaduud. Wafdigan ayaa ka yimid Magaalada Muqdisho. Masuuliyiinta Maamulka iyo qeybaha bulshada ayaa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradah Cabudwaaq, waxaana wafdiga loo galbiyey gudaha magaalada. Maxamed Xaashi ayaa la filayaa inuu waqtiyada soo socda kulamo la qaato […]
August 29, 2018 admin477
Golaha deegaanka Magaalada Garowe ayaa u doortay guddoomiyaha cusub ee magaaladaas Axmed Barre ka dib doorasho maanta lagu qabtay Magaalada Garowe. Musharaxiinta kala ah , Axmed Bare Siciid Muuse iyo Maxamed Abshir Jaamac Bakuuke ayaa ku tartamaayay Duqa Magaalada Garowe. Doorashada ayaa waxaa ku guulaystay Axmed Bare Siciid Muuse oo helay 18 cod , halka […]
August 28, 2018 admin287
Masuuliyiin ka tirsan Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Shacab aad u badan ayaa hadda ku sugan Garoonka Kubadda Cagta ee Stadium Muqdisho, iyagoo soo dhaweeyay Cutubyadii ugu dambeeyay Ciidamada AMISOM oo ka baxay garoonka. Shacabka ayaa ku damaashaadaya qeybaha kala duwan ee garoonka oo mudo 7-sano ah ay gacanta ku hayeen Ciidanka Nabad galyada Midowga Afrika […]
August 28, 2018 August 28, 2018 admin366
Tababar ku saabsan waxbarashada Madaniga ah ee dastuurka oo socday muddo afar maalin ah 25-28 August 2018, oo ay soo qabanqaabiyeen Wasaaradda Arrimaha Dastuurka XFS iyo wasaaradda dastuurka iyo Dib-u-Heshiisiinta Galmudug oo lagu baranayay waxbarashada madaniga ah ee dastuurka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Cadaaado ee ee dowlad goboleedka Galmudug. Tababarkaan oo loo qabtay […]